OTU ESI EDEKỌRỊTA IHE EDETU NA ODNOKLASSNIKI - ỤMỤ KLAS - 2019
Isi Ụmụ klas
Nkesa nke ndetu na Odnoklassniki
Ọtụtụ ndị ọrụ achọpụtala na mgbe ị na-arụ ọrụ na Microsoft Excel, enwere ọnọdụ mgbe ị na-ede data karịa nọmba, akara ngosi na-apụta n'ụdị grid (#). Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọrụ na ozi a n'ụdị a. Ka anyị ghọta ihe kpatara nsogbu a ma chọta ngwọta ya.
Ntughari Lattice (#) ma ọ bụ, ebe ọ bụ ihe ziri ezi ịkpọ ya, oktotorp na-egosi na mkpụrụ ndụ ndị dị na mpempe akwụkwọ Excel, nke data adịghị adaba na ókèala. Ya mere, ha na-anọchi anya anya na akara ndị a, ọ bụ ezie na n'eziokwu, n'oge mgbawa, usoro ahụ ka na-arụ ọrụ n'eziokwu, ọ bụghịkwa ndị na-egosipụta na ihuenyo ahụ. N'agbanyeghị nke a, maka onye ọrụ ahụ amaghị data, ya mere, nsogbu nke iwepụ nsogbu ahụ dị mkpa. O doro anya na ọ nwere ike ịchọta data dị na ya site na ntule usoro, mana maka ọtụtụ ndị ọrụ a abụghị nhọrọ.
Tụkwasị na nke ahụ, nsụgharị ochie nke usoro nlekota ahụ gosipụtara ma ọ bụrụ, mgbe ị na-eji usoro ederede, ihe odide ndị dị na cell nwere ihe karịrị 1024. Ma, malite na mbipute Excel 2010, a wepụrụ ikikere a.
Ka anyị chọpụta otu esi edozi nsogbu a.
Usoro 1: Mmụba Ntuziaka
Ụzọ kachasị mfe na nke kachasị emetụta ọtụtụ ndị ọrụ iji gbasaa ókèala cell, ma, ya mere, dozie nsogbu nke igosipụta grids kama nọmba, bụ iji aka ịdọrọ ala nke kọlụm ahụ.
Emere nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe. Debe onye na-ede okwu n'ókè dị n'agbata ogidi dị iche iche. Anyị na-echere ruo mgbe onye ọbụla na-atụgharị na ntụ ntụ. Anyị na-eji bọtịnụ aka ekpe nke anyị na-pịa bọtịnụ, ma jide ya, dọrọ ala ruo mgbe ị ga-ahụ na data niile dabara.
Mgbe ịmechara usoro a, cell ahụ ga-amụba, ọnụ ọgụgụ ga-egosikwa n'ọnọdụ grids.
Usoro 2: Mbelata Mpempe
N'ezie, ọ bụrụ na e nwere naanị otu ma ọ bụ abụọ oghere nke data adịghị adaba na mkpụrụ ndụ, ọ dị nnọọ mfe ịhazigharị ọnọdụ ahụ n'ụzọ a kọwara n'elu. Ma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nnukwu ogidi dị otú ahụ. N'okwu a, ịnwere ike iji mbelata mpempe akwụkwọ iji dozie nsogbu ahụ.
Họrọ ebe anyi choro iji belata font.
Ịbụ na taabụ "Home" na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Font" mepee ụdị mgbanwe ụdị. Anyị setịpụrụ akara ahụ ka ọ bụrụ ihe na-erughị nke a na-egosi ugbu a. Ọ bụrụ na data ahụ adịghị adaba na mkpụrụ ndụ ahụ, wee dezie ogidi ndị ahụ ruo mgbe a ga-enweta nchọta chọrọ.
Nzọụkwụ 3: Nnwefe nke onwe
E nwere ụzọ ọzọ ị ga - esi gbanwee font na mkpụrụ ndụ. A na-eme ya site na nhazi. N'otu oge ahụ, ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụedemede ahụ agaghị abụ otu ihe ahụ maka ụdị ahụ dum, na na kọlụm ọ bụla ga-enwe njirimara zuru ezu iji dabara data na cell ahụ.
Họrọ ụdị data nke anyị ga-arụ ọrụ. Pịa bọtịnụ òké aka nri. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ uru "Hazie mkpụrụ ndụ ...".
Nhazi usoro ga-emepe. Gaa taabụ "Ndozi". Debe nnunu nso nso "Ịdị Ukwuu Nke Ukwuu". Iji dozie mgbanwe, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Dika ị pụrụ ịhụ, mgbe nke a gasịrị, font ke mkpụrụ ndụ ahụ belatatara nke ọma ka data dị n'ime ha dabara adaba.
Usoro 4: gbanwee usoro ọnụọgụgụ
Ná mmalite, enwere mkparịta ụka na na nsụgharị nke Excel a kpaara ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ edemede na otu sel mgbe ị na-etinye nchịkọta ederede. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ na-anọgide na-erigbu ngwanrọ a, ka anyị biri na ngwọta nke nsogbu a. Iji mee ka njedebe a kwụsị, ị ghaghị ịgbanwe usoro si ederede gaa n'ozuzu.
Họrọ ebe a choro. Pịa bọtịnụ òké aka nri. Na menu na-egosi, pịa ihe ahụ "Hazie mkpụrụ ndụ ...".
Na window formatting gaa na taabụ "Ọnụ ọgụgụ". Na oke "Ụdị Nọmba" agbanwe agbanwe "Ederede" na "General". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Ugbu a, ewepụrụ ihe mgbochi na a ga-egosipụta ọnụ ọgụgụ ọ bụla nke mkpụrụ edemede na cell.
I nwekwara ike gbanwee usoro dị na rịbọn na taabụ "Home" na ngọngọ nke ngwaọrụ "Ọnụ ọgụgụ"site na ịhọrọ uru bara uru na windo pụrụ iche.
Dịka ị nwere ike ịhụ, dochie oktotorp na nọmba ma ọ bụ data ndị ọzọ dị na Microsoft Excel abụghị ihe siri ike. Iji mee nke a, ị ghaghị ịbawanye ogidi ma ọ bụ belata font. Maka nsụgharị nke usoro ihe omume ahụ, ịgbanwe usoro ederede na otu a dị mkpa.
https://termotools.com ig.termotools.com © Ụmụ klas 2019